Sida loo qaado YouTube Audio fudayd
> Resource > Video > Sida loo qaado Audio ka YouTube Video
"Sidee baad ka video youtube qaadan audio iyo waxa ay ka dhigi galay mp3 ah? waxaa jira waxyaabo badan oo ah qaab ku nool iyo / ama videos ee isticmaala youtube aan weli ku dheggan record oo id jecel yihiin in ay ku cd. i ahaa yaaban sida i qaadan kartaa video ah oo bartey sameeyo mp3 ah ka audio ah? caawimaad kasta oo la aad ayay ugu qanacsan lahaa, waxaan dib ugu abaal marinta noqon doonaa jawaab ugu fiican. mahad ka hor! "- Csjunkiee
Haddii aad qabto dhibaato la mid ah la Csjunkiee, aad ku sugan tahay meel ku haboon in xal weyn u hesho. Waa Audio Streaming taariikhqorihii , kaas oo awood kuu inay audio ka YouTube qaado si toos ah qaabka MP3. In eray kale, uma baahnid inaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo ka videos YouTube hore ka dibna loogu badalo in ay qaab MP3 ah. Ma doonaysaa in ay isku day ah? Bal aan ka soo hubi hoos ku qoran.
1 Ku rakib Streaming taariikhqorihii Audio
First of dhan, aynu heli barnaamijkan lagu rakibay on your computer. Waxaa jira laba nooc halka diiradda ee qodobkan waa version daaqadaha. Ka dib markii la rakibey, ordo barnaamijka.
2 Bilow in aad qaadato audio ka YouTube video
U fiirso button Record ah oo ku saabsan suuqa kala hoose? Waxaa Riix oo taga si ciyaaro video YouTube ah. Markaas barnaamijka bilaabo qaadashada YouTube audio. Hubi video ka ciyaara si habsami leh. Dabcan, waa in aad u ciyaaro mid ka mid video waqti. Laakiin wuxuu kaa badbaaadin karaa ciyaaro playlist YouTube ah halka software lagu ogaan karaa gabal kasta oo maqal ah sida wakhtigii aamusnaanta.
Audio ayaa laga soo qaaday YouTube videos waa qaab ka mid ah MP3, si aad si toos ah ugu ciyaaryahan warbaahinta ee kombiyuutarada iyo kombuyuutarrada gacanta ciyaari karo. Halkan waa hab aad si ay u gudbiyaan audio ee qalabka la qaadi karo.
Dooro file maqal ah uu furmo suuqa Library iyo guji Add badhanka Lugood si hoose. Markaas faylka loo gudbin karaa Lugood soo bandhigeen in playlist SAR ah. Iyadoo Lugood, aad u hagaagsan kartaa in mid ka mid ah aaladaha Apple aad.
Wixii qalab kale, ma ahan lagama maarmaan u ah in aad ku darto si Lugood. Waxaad xaq u-riixi kartaa file maqal ah oo dooro Open ee Folder si aad u ogaato meesha file la badbaadiyey. Markaas jiidi oo hoos u qalabka aad.
Xusuusnow: Ku dar button Lugood in aan la heli karin in version Mac ah. Waxaad u baahan tahay inaad hore u ogaato meesha file maqal ah waxa lagu kaydiyaa on your computer Mac.
Kale oo ka audio qaadashada ka YouTube video, barnaamijka ayaa sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad si ay u sameeyaan ringtones, la abuuro playlist iyo edit macluumaadka ku saabsan file maqal ah. Sidaas waa in aad mid leedahay on your computer oo wuxuu ku raaxaysan music cozily hadda ka dib.
Top 5 Free Online AVI in Converter MP4